मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्न अनुदान
माधवकुमार ओली रोल्पा । प्रदेश–५ सरकारले मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले किसानका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । पहिलो चरणमा पशुपालन गर्दै आएका किसानलाई लक्षित गरी यस वर्ष बाख्रा तथा बंगुर फार्म स्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि अनुदानका कार्यक्रम तय गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्ग...
दाङमा साढे ४८ हजारले भरे बेरोजगार फारम
दाङ (अस) । दाङमा ४८ हजार ५८४ जनाले बेरोजगार फारम भरेका छन् । बेरोजगारी र गरीबी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहबाट आवेदन लिइएको हो । घोराही उपमहानगरपालिकाबाट सबैभन्दा धेरै १३ हजार २५७ जनाले आवेदन भरेका छन् भने सबैभन्द...
राजेश जीसी जेठ ११, प्यूठान । यहाँका व्यापारीले म्याद गुज्रिएका सामाग्री विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर, उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय भैरहवा यहाँका स्थानीय तहको समन्वयमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीले म्याद स...
निःशुल्क सेवा दिएबापत अस्पतालले मागे भुक्तानी
जेठ ११, रुपन्देही । निःशुल्क सेवा दिएबापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका सञ्चालकले बताएका छन् । विपन्न नागरिकलाई मिर्गौलाको डायलसिस गर्न रू. १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएबापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नपाएक...
लसुनको मूल्य : प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्म पाएपछि किसान खुशी
जेठ १०, रोल्पा । यस वर्ष लसुनले राम्रो मूल्य पाएपछि रोल्पाका किसान हर्षित भएका छन् । गतवर्ष थोरै मूल्यमा विक्रि गर्न बाध्य यहाँका किसानले यसवर्ष भने प्रतिकेजी ७० देखि ९० रुपैयाँसम्म लसुन विक्री गरेका छन् । जिल्लाको बुढागाउँ, नुवागाउँ, झेनाम, डुब्रिङ र सखी लगायतका किसानले यस वर्ष लसुनको राम्रो मूल्य...
जेठ ९, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जले अब ‘फोहरी शहर’को कटाक्ष सुन्नु नपर्ने भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२३ हिरमिनियामा अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइड (फोहर प्रशोधन केन्द्र) को निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यो शहरले वर्षौंदेखि सुन्दै आएको ‘फोहरी शहर’को कटाक्ष सुन्नु नपर्ने भएको हो । ‘अब टोलटोलमा थुपारिएका...
भक्तबहादुर शाही जेठ ९, नेपालगञ्ज । साहसिक यात्रा मन पराउने मध्यमवर्गिय भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरि ‘दिल्ली टु रारा एडभेन्चर टुर’ प्याकेज शुरु गरिएको छ । सन् २०२० रारा पर्यटन बर्ष सफल बनाउनको लागि सो प्याकेज शुरु गरिएको हो । मुक्तिनाथ दर्शन र घुमघामको लागि आउने मौसमी पर्यटकमा निर्भर बाँकेको होटल व्य...
बीपी गौतम जेठ ८, रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा जग्गाको पुनः नापी शुरु भएको छ । वडा नम्वर १५ को कोटिहवाबाट जग्गाको पुनःनापी शुुरु गरिएको हो । पुनःनापीमा डिजिटल प्रविधि अपनाइएको छ । दुई वर्ष भित्र नगरपालिकाका १७ वडामैं सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ पुनः शुरु गरिएको नगरपालिकाले बताएको छ ।...
भक्तबहादुर शाही जेठ ८, नेपालगञ्ज । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाँके जिल्लामा बेरोजगारीले रोजगारी पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बाँकेका स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्र अनुसार बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएकामध्ये १ हजार ८३२ जनाले ३० दिन बराबरको रोजगारी पाउने भएका हुन् । सरकारले...
आशा सिक्टा सिँचाईको, भर आकाशको !
भक्तबहादुर शाही जेठ ८, नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट खेतवारीमा अन्नवाली फलाउने आशा बोकेका बाँके र बर्दियाका बासिन्दा आकाशकै भरमा अन्न उत्पादन गर्न बाध्य छन् । पानी पाउने आश्वासन पाएको बर्षौं वितिसक्दा पनि आकाशकै भरमा किसानले खेती गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । चुनावताका सिक्टा स...